Cultuurleerlijn_ perceive_derdegraad - Gaa! AKWỤKWỌ AKWỤKWỌ
Nke atọ DEGREE
GỊNỊ BỤ N'ỤLỌ NCHE?
GỊNỊ KA Onye nkụzi Na-eme?
Nke a bụ nchịkọta nke ụdị ọrụ na omume ndị a pụrụ iji mee ihe n'ọtụtụ ụzọ / ọmụmụ isiokwu / ọzụzụ ọmụmụ.
Nke a bụ nchịkọta nke ebumnuche bụ isi na isi-ebumnuche. Ejikọtara ha na ihe mgbaru ọsọ ikpeazụ ahụ. Tụkwasị na nke ahụ, ụfọdụ ndụmọdụ & usoro aghụghọ / ihe & ntinye gbasara ọrụ dị iche iche na ụdị ọrụ.
Ebumnuche na-enweghị isi:
Atụmatụ & usoro:
Lee ụfọdụ ihe atụ ndị dị irè, ihe nlereanya dị mma site na ụlọ akwụkwọ ahụ, na "ịghọta" nkà mmụta omenala maka ogo mmụta mbụ.
Kedu ihe bụ nghọta?
Ịghọta dị ka nkà mmụta omenala ọ bụghị nanị ịkọwa anya. Ọ bụ okwu n'ozuzu maka ụzọ niile anyị nwere ike isi kpokọta ozi site na uche. Ọ bụ ihe dị iche iche dị iche iche dị egwu nke mmadụ nwere (lee, anụ, uto, ísì, mmetụta). Ojiji nke uche ziri ezi bụ ihe ndị mmadụ na-eme na-akpaghị aka. Ka o sina dị, nkà ndị ahụ nwere ike ịzụlite ma nwee ike ịzụ ya. Na mmepe na usoro mmụta, nghọta na-aghọzi usoro nke ịhọrọ, ndebanye aha na ịhazi, inweta ozi (ịchọ, ige nti, ntanetụ, ntutu, ịcha, ịchọta, ịchọpụta, ịchọta, wdg). Ha na-ejikọta ihe ndị mmadụ na-echeta na-echeta. Anyị na-ekwu banyere ncheta echiche nke na-eme ka ndị mmadụ ghọta ma ọ bụ ghọta ihe na ịchekwa na iburu ihe ọhụrụ ahụ (nke ha na-amaghị).
Mkpa ọ dị aghọta na mmụta omenala
Iji mara ọdịbendị nke gị ma ọ bụ nke ndị ọzọ - na nkenke, iji mara ọdịbendị, ọ dị mkpa ịzụlite ma mee ike nghọta. Idebe bụ, nke mbụ, ihe mbụ na mkpa dị mkpa iji nwee ike itinye usoro omenala nke ndị mmadụ (ụzọ ndị mmadụ si egosipụta ọdịdị na ihe ọ pụtara nye onwe ha na gburugburu ebe obibi ha). Nzọụkwụ ahụ dị mkpa iji nwee ike ịtụgharị uche n'àgwà ọdịnala dịka onye ma ọ bụ dịka otu.
Echiche nke uche banyere ọdịbendị (SW)
Na-enweta ahụmahụ ma na-enweta ọdịbendị nke a na-ahụ (BE)
Icheta ma ghọta omenala a na - ahụ anya (MH)
Isi Iyi: Nzuzu ndi omenala di iche iche. Uzo mmepe nke dabere na omenala omenala "Culture in Mirror" (c) 2016, KU Leuven & Vrije Universiteit Brussel
N'ỤLỌ ỌTỤRỤ ỌZỌ MGBE ỌZỌ NA-AHỤ NKE DEGREE nke atọ
MGBE AHỤ AGBỤ AGBỤ AGBANYE